Home > safarka Europe > 12 Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida
Tan iyo markii ay 1871 taageerayaasha muusikada ee dhammaan noocyada, ka soo qayb gal Royal Albert Hall for 365 maalmood. Sidaas, inaad tahay jazz, dhagax, ama fannaan muusig fan ah, riwaayad toos ah oo muusig ah oo ka socota Royal Albert Hall waa waayo-aragnimo aadan rabin inaad seegto markaad joogto London. Hoolka Royal Albert Hall wuxuu ku yaal Koonfurta Kensington, oo si fudud tubbo looga heli karo.
Goobta labaad ee ugu wanaagsan ee muusigga ah 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka waa O2 Arena ee London. Waa mid ka mid ah goobaha muusigga tooska ah ee ugu waaweyn Yurub, iyo adduunka, qolka leh a 20,000 dhagaystayaasha. Waxaa intaa dheer, in 2008 xitaa waxay dhaaftay iibka tikidhada ee Madison Square Garden.
3. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Musikverein In Vienna, Austria
Loogu talagalay sidii sanduuqa muusigga ugu fiican, halbeeg xarrago leh, ah Wiener Musikverein, ama ururka muusikada, waa goobta ugu dambeysa ee muusikada caadiga ah ee Yurub. Hoyga Viennese philharmonics, hoolka muusikada waxaa loogu talagalay qaabka caadiga ah ee macbudka Yurub, oo leh saqafka sare Frescos of Apollo.
364 maalmood sanadkii, music jecel adduunka oo dhan, u safri Vienna si aad u hesho waayo-aragnimo muusig soo jiidasho leh oo aan la ilaawi karin. Thanks to dhismaha, acoustics, music, goobta, iyo jawi, Musikverein-ka ayaa ugu sareysa 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka.
Laga soo bilaabo pop laadinta casriga ah ilaa Hans Zimmer, dhacdooyinka muusikada tooska ah Arena of Nimes waa lama iloobaan. Iyada oo gidaarrada lagu shido laydhadh midab leh habeenkii, nidaamka dhawaaqa on – Riwaayad halkan ka dhaceysa ayaa runtii ah koronto.
9. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Felsenreitschule In Salzburg, Austria
10. Tiyaatarka Qadiimiga ah ee Taormina, Italy
12. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Tiyaatarka Qadiimiga ah ee Liinta, France
BestConcertsEurope BestMusicVenuesInTheWorld riwaayad LiveMusicEurope goobta muusigga MusicVenues
3 Best Saffarada Day From Budapest By tareenka
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka ee Hungary, safarka Europe